Xasan Sheekh oo billaabay inuu la kulmo Odayaasha dhaqanka | KEYDMEDIA ONLINE
Xasan Sheekh oo billaabay inuu la kulmo Odayaasha dhaqanka
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa billaabay kulamo uu la yeelanayo Odayaasha dhaqanka iyo qeybha kala duwan ee bulshada
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay la weeraray hoyga uu ka daggan yahay magaalada Muqdisho ayaa maanta billaabay in uu kulamo la qaato Odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada. Madaxweynaha ayaa la kulmay Odayaasha Dhaqanka beesha Mudullood, waxa ayna iska wareysteen shaqaaqadii shalay ka dhacday gurigiisa iyo weerarkii lagu soo qaaday.
Xasan Sheekh ayaa dhawaan uguuray halka loo yaqaan Mirinaayo oo ku taal degmada Kaaraan, waxaana shalay weerar qorsheysan ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya, weerarka ayaa looga adkaaday cidamadii dowladda ee weerarka geystay, waxaana laga qabsaday fariiisimo ay horay u joogeen kuwaasoo u dhawaa halka uu madaxweynuhu dagay ee Mirinaayada.
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay weerarkaasi ayaa beenisay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud la weeraray, waxayna ku tilmaameen arrintaasi mid been abuur ah oo aan waxba ka jirin, iyadoo saacado kaddib weerarka Xasan Sheekh lagu qaaday kaddib haddana ay ciidamada dowladdu weerareen musharaxa xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Kulamo gaar-gaar ah oo looga arrinsanayo xaaladda magaalada Muqdisho ayaa hadda ka socda, iyadoo dowladda ay codsatay in lakala dhex galo oo waan-waan laga dhex billaabo iyaga xubnaha golaha midowga musharaxiinta ee shalay ilaa xalay dagaalku kala dhaxeeyay.